Ny Arivotaona - Fiangonan'Andriamanitra Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny arivo taona
Ny arivo taona dia ny vanim-potoana voalaza ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy izay hiarahan’ny maritiora kristiana hiara-manjaka amin’i Jesosy Kristy. Aorian’ny Arivotaona, rehefa nazeran’i Kristy ny fahavalo rehetra ka nanjakany ny zavatra rehetra, dia hatolony an’Andriamanitra Ray ny fanjakana, ary havaozina ny lanitra sy ny tany. Ny fomban-drazana kristiana sasany dia mandika ara-bakiteny ny arivo taona ho arivo taona mialoha na aorian’ny fiavian’i Kristy; ny hafa indray mahita fandikana ara-panoharana kokoa eo amin’ny tontolon’ny Soratra Masina: fe-potoana tsy voafaritra izay manomboka amin’ny fitsanganan’i Jesosy amin’ny maty ary mifarana amin’ny fiaviany fanindroany. ( Apokalypsy 20,1:15-2; 1,1.5; Asan'ny Apostoly 3,19-21; Epifania 11,15; 1. Korintiana 15,24-25)
Fijery roa momba ny arisenta
Ho an'ny Kristiana maro, ny arivo taona dia fampianarana tena lehibe, vaovao mahafaly. Saingy tsy asongadinay ny mileniuma. Nahoana? Satria mampiorina amin'ny fampianaranay ny Baiboly ny fampianarantsika, ary tsy manazava ny filazan'ny Baiboly ny fanambarana araka ny eritreritry ny sasany momba izany. Ohatra, mandra-pahoviana ny taonarivo? Ny sasany milaza fa sahabo ho 1000 taona izany. Ny Apokalypsy 20 dia milaza arivo taona. Ny teny hoe "millennium" dia midika arivo taona. Maninona no misy hisalasala momba izany?
Voalohany, satria feno tandindona ny bokin'ny Apokalipsy: biby, tandroka, loko, isa isa an'ohatra fa tsy ara-bakiteny. Ao amin'ny Soratra Masina, ny isa 1000 dia matetika ampiasaina ho isa boribory, fa tsy isa marina. Nilaza Andriamanitra fa an'arivony ny bibidia any an-tendrombohitra, tsy midika hoe isa marina izy io. Heveriny ho zandary arivo ny fifanekena nataony, nefa tsy misy dikany ny 40.000 taona. Ao amin'ny soratra masina toy izany, ny arivo dia midika isa tsy voafetra.
Toy izany ve ny "arivo taona" ao amin'ny Apokalypsy 20 ara-bakiteny sa azo takarina ara-bakiteny? Azo tanterahina tsara ve ny isa an'arivony ao amin'ity boky tandindona izay matetika tsy midika ara-bakiteny? Tsy afaka manaporofo amin'ny Soratra Masina isika fa afaka takarina tsara ny arivo taona. Noho izany, tsy afaka milaza isika fa maharitra taona arivo taona ny arivo taona. Na izany aza dia afaka milaza isika fa "ny arivo taona no faharetan'ny fotoana voalaza ao amin'ny Apokalypsy ..."
Azontsika atao ihany koa ny milaza fa ny arivo taona no “fotoam-potoana izay hiarahan'ny maritiora kristiana miaraka amin'i Jesosy Kristy”. Ambaran'ny Apokalipsy fa ireo izay notapahin-doha ho an'i Kristy dia hiara-manjaka aminy ary milaza amintsika fa hiara-manjaka amin'i Kristy mandritra ny arivo taona isika.
Rahoviana anefa izy ireo no manomboka manjaka? Amin'izany fanontaniana izany dia miditra amin'ny fanontaniana tena mahaliana momba ny Milenium isika. Misy fomba roa na telo na efatra fijerena ny areniora.
Ny sasany amin'ireto fomba fijery ireto dia ara-bakiteny kokoa amin'ny alàlan'ny Soratra Masina sy ny an'ohatra kokoa. Saingy tsy misy mandà ny voalazan'ny Soratra Masina - izy ireo ihany no mandika azy ireo. Samy milaza izy ireo fa mampiorina ny heviny ao amin'ny Soratra Masina. Resaka fandikana io matetika.
Eto isika dia milazalaza ny fomba fijery roa mahazatra indrindra amin'ny alàlan'ny mileniuma miaraka amin'ny tanjany sy ny fahalemeny, ary avy eo hiverina eo amin'izay azontsika lazaina miaraka amin'ny fahatokisana lehibe indrindra.
Avy amin'ny fomba fijery mialoha, miverina alohan'ny taona arivo Kristy.
Raha jerena ny fomba fiandoham-pirenena dia miverina averina aorian'ny taona arivo taona i Kristy, saingy antsoina hoe amillenne na tsia millennes satria milaza izy fa tsy misy millennium manokana izay hafa noho ilay efa iainantsika. Io fomba fijery io dia milaza fa efa ao anatin'ny vanim-potoana izay mamaritra ny Apokalypsy 20 isika.
Mety toa tsy mampino ny mino fa ny fitsipahana arivo taona dia fotoanan'ny fandriampahalemana izay azo atao aorian'ny fiverenan'i Kristy. Mety mipoitra fa "ireo olona ireo dia tsy mino ny Baiboly" - kanefa dia milaza ho mino ny Baiboly izy ireo. Ho tombotsoan'ny fitiavana kristiana dia tokony hiezaka isika hahatakatra ny antony inoany fa milaza izany ny Baiboly.
Ny fomba fijery mialoha
Atombohy amin'ny fanolorana ny toerana mialoha ny vanim-potoana.
Testamenta Taloha: Voalohany, faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha maro no milaza mialoha ny vanim-potoana volamena hisian'ny olona hifandray tsara amin'Andriamanitra. “Ny liona sy ny zanak'ondry hiara-mandry, ary zazalahy kely no handroaka azy. Tsy hisy ota intsony na aiza na aiza eto an-tendrombohitra masina, hoy Jehovah.
Indraindray dia toa tsy hitovy tanteraka amin’izao tontolo izao ity ho avy ity; indraindray toa mitovy. Indraindray dia toa tonga lafatra ary indraindray dia mifangaro amin'ny fahotana. Ao amin’ny andalan-teny toa an’i Isaia 2, ohatra, dia olona maro no hilaza hoe: “Andeha isika hiakatra any an-tendrombohitr’i Jehovah, ho any an-tranon’Andriamanitr’i Jakoba, mba hampianarany antsika ny lalany, ka handehanantsika amin’ny lalany. ny lalany! Fa avy ao Ziona no hivoahan’ny fampianarana, ary avy any Jerosalema ny tenin’i Jehovah” (Isaia 2,3).
Na izany aza, hisy ny olona ilaina hananatra. Mila fangady ny olona satria tsy maintsy misakafo, satria mety maty. Misy singa mety ary misy singa mahazatra. Hisy ankizy kely, hisy ny fanambadiana, ary hisy ny fahafatesana.
Nilaza tamintsika i Daniela fa hanangana fanjakana ny Mesia ka hameno ny tany rehetra ary hanolo ny fanjakana rehetra teo aloha. Misy am-polony ireo faminaniana ireo ao amin'ny Testamenta Taloha, saingy tsy manelingelina ny fanontaniantsika manokana izany.
Nahatakatra ireo faminaniana ireo ireo ho fambara amin'ny ho avy eto an-tany. Nanantena izy ireo fa ho avy ny Mesia ary hitondra ary hitondra ireo fitahiana ireo. Ny literatiora jiosy taloha sy taorian'i Jesosy dia nanantena fanjakan'Andriamanitra teto an-tany. Toa nanantena zavatra mitovy ny mpianatr'i Jesosy. Koa rehefa nitory ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy, dia tsy afaka ny hihevitra fa tsy misy ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Izy dia nitory tamin'ny olona iray izay nanantena ny vanim-potoana volamena notarihin'ny Mesia. Raha niresaka momba ny «Fanjakan’Andriamanitra» izy, izany dia tao an-tsaina.
Ireo mpianatra: Nilaza i Jesosy fa efa akaiky ny fanjakana. Dia nandao azy izy ary nilaza fa hiverina. Tsy ho sarotra tamin’ireo mpanara-dia ireo ny nanatsoaka hevitra fa rehefa hiverina i Jesosy, dia hitondra ny vanim-potoana volamena i Jesosy. Nanontany an’i Jesoa ny mpianatra hoe rahoviana Izy no hamerina ny fanjakana amin’ny Isiraely (Asa 1,6). Nampiasa teny grika mitovy amin’izany izy ireo mba hilazana ny fotoana namerenana ny zava-drehetra tamin’ny laoniny, rehefa niverina tao amin’ny Asan’ny Apostoly i Kristy 3,21: “Tsy maintsy mandray Azy ny lanitra mandra-pahatongan’ny fotoana hampodiana ny zavatra rehetra, izay nampilazain’Andriamanitra ny mpaminaniny masina hatramin’ny voalohany”.
Nanantena ny mpianatra fa hotanterahina amin'ny fotoana ho avy aorian'ny fiverenan'i Kristy ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Tsy nitory firy momba an'io vanimpotoana volamena io ny mpianatra satria efa fantatry ny mpihaino jiosy azy ireo io hevitra io. Tokony ho fantatr'izy ireo hoe iza ny Mesia, ka io no tena nifantohan'ny toriteny apôstôly.
Raha ny voalazan'ireo praiminisistika dia nifantoka tamin'ny zava-baovao izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalàn'ny Mesia ny toriteny apôstôly. Satria mifantoka amin'ny fomba hahatanteraka ny famonjena amin'ny alàlan'ny Mesia izy, dia tsy voatery hiresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra ho avy izy, ary sarotra ho antsika ankehitriny ny mahafantatra marina ny zavatra ninoany momba azy sy ny fomba nahalalany izany. Na dia izany aza anefa, mahita santionan'ny taratasin'i Paoly voalohany ho an'ny Korintiana isika.
Paul: In 1. Korintiana 15, i Paoly dia manazava ny finoany ny fitsanganana amin’ny maty, ary ao anatin’izany toe-javatra izany dia nilaza zavatra momba ny fanjakan’Andriamanitra izy izay inoan’ny sasany fa manondro fanjakana arivo taona aorian’ny fiverenan’i Kristy.
“Fa tahaka ny ahafatesan’izy rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’ny olona rehetra kosa ao amin’i Kristy. Fa samy araka ny filaharany avy: Kristy no santatra; ary rehefa tonga izy, dia izay an’i Kristy”1. Korintiana 15,22-23). Nohazavain’i Paoly fa misesy ny fitsanganana amin’ny maty: Kristy aloha, ary avy eo ny mino. Nampiasa ny teny hoe “aorian’ny” i Paoly eo amin’ny andininy faha-23, mba hilazana ny fahatarana eo amin’ny 2000 taona eo ho eo. Mampiasa ny teny hoe “aorian’ny” ao amin’ny andininy faha-24 izy mba hilazana dingana iray hafa amin’ilay filaharana:
«Ary amin'izany ny farany, rehefa natolony an'Andriamanitra Ray ny fanjakana, rehefa naringany ny fanapahana rehetra sy ny hery rehetra ary ny herisetra. Satria tsy maintsy manjaka izy mandra-panaon'Andriamanitra ny fahavalo rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahavalo farany haringana dia ny fahafatesana ”(and 24-26).
Noho izany dia tsy maintsy manjaka i Kristy mandra-panaony ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Tsy fisehoan-kery indray mandeha akory io - fe-potoana eo. Kristy dia manapaka fe-potoana iray izay hamonoany ny fahavalo rehetra, eny fa fahavalon'ny fahafatesana aza. Ary rehefa afaka izany, dia tonga ny farany.
Na dia tsy mirakitra ireo dingana ireo aza i Paul amin'ny fandaharan-tantara iray, ny fampiasana ny teniny "aorian'ny" dia mampiseho dingana isan-karazany ao amin'ny drafitra. Voalohany ny nitsanganan'i Kristy. Ny dingana faharoa dia ny fitsanganan'ny mino ary avy eo i Kristy no hanapaka. Araka io fomba fijery io dia ny dingana fahatelo dia ny fanolorana ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra Ray.
Apokalypsy 20: Ny Testamenta Taloha dia manambara vanim-potoana volamena milamina sy fanambinana eo ambany fitondran'Andriamanitra ary milaza amintsika i Paoly fa mivoatra ny drafitr'Andriamanitra. Fa ny tena fototry ny fijerin'ny fotoana taloha dia ny Bokin'ny Apokalypsy. Ity dia boky izay inoan'ny maro fa manambara ny fomba hiarahan'izy rehetra. Mila mandany fotoana ao amin'ny Toko 20 isika mba hahitana izay voalaza.
Atombohy amin'ny fandinihantsika fa ny fiverenan'i Kristy dia voalaza ao amin'ny Apokalypsy 19. Izy io dia mamaritra ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Nisy soavaly fotsy, ary ny mpitaingina dia Tenin 'Andriamanitra, Mpanjakan'ny mpanjaka ary Tompon'ny Tompon'ny tompo. Izy no mitarika ny tafika avy any an-danitra ary izy
mifehy an'ireo firenena. Mandresy ilay bibidia, ny mpaminany sandoka sy ny tafiny. Ity toko ity dia mamaritra ny fiverenan'i Kristy.
Avy eo dia tonga eo amin'ny Apokalypsy 20,1: "Ary nahita anjely nidina avy tany an-danitra ..." Tao amin'ny fikorontanan'ny literatiora ny Bokin'ny Apokalipsy, ity dia fisehoan-javatra iray izay nitranga taorian'ny niverenan'i Kristy. Inona no nataon'ity anjely ity? «... manana ny lakilen'ny lavaka tsy hita noanoa izy ary rojo vy lehibe eny an-tanany. Ary izy nitazona ilay dragona, ilay menarana taloha, dia ny devoly sy Satana, ka nofatorany arivo taona. " Tsy ara-bakiteny ny rojo - izany dia mampiseho zavatra izay azon'ny fanahy mitazona ny toerany. Fa ny devoly mikombona.
Eritrereto ve ireo mpamaky ny Apokalipsy voalohany nenjehin'ny Jiosy sy ny Romana fa efa nofatorana i Satana? Mianatra isika ao amin'ny Toko 12 fa ny devoly dia mamitaka an'izao tontolo izao ary miady amin'ny Eglizy. Toa tsy voafehin'ny devoly izany. Tsy hangonina mihintsy izy mandra-paharesy ilay biby sy ilay mpaminany sandoka. Andininy faha-3: "... dia natsipiny tao amin'ny lavaka tsy hita noanoa ary nanisy tombo-kase ary nasiana tombo-kase ka tsy hamitaka ny olona mandra-pahatongan'ny arivo taona. Aorian'izany dia tokony havoaka vetivety foana izy. » Jaona dia nahita ny devoly nihanalefaka vetivety. Ao amin'ny toko faha-12 dia mamaky isika fa ny devoly dia mamitaka an'izao tontolo izao. Eto dia voasakana tsy hikorok'izao tontolo izao mandritra ny arivo taona izy. Tsy mifatotra fotsiny izy io - mikatona sy nofehezina. Ny sary omena antsika dia mampiseho famerana tanteraka, tsy fahaizana mitarika, tsy misy fitaomana intsony.
Fitsanganana amin'ny maty sy fanapahana: Inona no hitranga mandritra ireo arivo taona ireo? Nanazava izany i Jaona ao amin'ny andininy faha-4: "Ary nahita seza fiandrianana aho dia nipetraka teo amboniny ary nomena ny fitsarana azy ireo." Fanamelohana izay hitranga aorian'ny fiverenan'i Kristy. Ary ny andininy faha-4 dia manohy:
"Ary hitako ny fanahin'ireo izay notapahin-doha noho ny fijoroana ho vavolombelona momba an'i Jesosy sy ny Tenin'Andrimanitra, ary izay tsy niankohoka teo amin'ilay bibidia sy ny sariny ary ireo izay tsy nandray ny famantarana teo amin'ny handriny sy tamin'ny tanany; Ireo dia velona ary niara-nanjaka tamin'i Kristy nandritra ny arivo taona. »
Eto dia mahita ireo maritiora izay miara-manjaka amin'i Kristy i Johannes. Ny andininy dia milaza fa ireo dia notapahin-doha, saingy tsy azo inoana fa ny fakana ity endrika manokana amin'ny maritiora ity dia toy ny hoe ny kristiana novonoin'ny liona dia tsy hahazo valisoa mitovy. Fa ilay fitenenana "notapahin-doha" dia toa fanehoana izay manolotra izay rehetra nanolotra ny ainy ho an'i Kristy. Izany dia mety hahalala ny Kristianina rehetra. Na aiza na aiza ao amin'ny Apokalypsy dia mamaky isika fa ny mpino rehetra an'i Kristy dia hiara-manjaka aminy. Ka manapaka miaraka amin'i Kristy mandritra ny arivo taona, raha mbola voafatotra i Satana ary tsy afaka hampitaona ny vahoaka intsony.
Ny andininy faha-5 avy eo dia mampiditra eritreritra tampoka: "(ny maty hafa tsy nody raha tsy efa vita ny arivo taona)". Ka hisy ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny faran'ny arivo taona. Ny Jiosy talohan'ny andron'i Kristy dia nino fotsiny tamin'ny fitsanganana amin'ny maty. Izy ireo ihany no nino ny fisehoan'ny Mesia. Ny Testamenta Vaovao milaza amintsika fa sarotra kokoa ny zavatra. Ny Mesia dia tonga amin'ny fotoana hafa noho ny antony samihafa. Mandroso ny drafitra.
Ny ankamaroan'ny Testamenta Vaovao dia mamaritra ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny faran'ny taona ihany. Saingy ny bokin'ny Apokalipsy dia manambara ihany koa tsikelikely. Tahaka ny misy ny "Andron'ny Tompo" dia mbola misy fitsanganana amin'ny maty iray ihany. Misokatra ny horonam-boky mba hampahafantarana ireo antsipirihany momba ny fanatanterahana ny drafitr'Andriamanitra.
Ao amin'ny faran'ny fanehoan-kevitra nampidirina momba ny maty hafa, ny andininy faha-5-6 dia miverina amin'ny vanim-potoana arivo taona: «Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay mandray anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ny fahafatesana faharoa dia tsy manam-pahefana amin'izy ireo; fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ary hiara-manjaka aminy arivo taona. »
Ilay fahitana dia nanambara fa hisy fitsanganana amin'ny maty hafa - ny iray amin'ny fiandohan'ny taona arivo taona ary ny iray amin'ny fiafarana. Ho mpisorona sy ho mpanjaka ao amin'ny fanjakan'i Kristy ny olona rehefa tsy voataonan'i Satana intsony ireo firenena.
Ny andininy faha-7-10 dia mamaritra zavatra iray any amin'ny faran'ny taona arivo: Hafahana i Satana, hanaitaitra ny vahoaka indray izy, hamely ny vahoakan'Andriamanitra ary ho resy indray ny fahavalo ary hatsipy ao anaty dobo mirehitra.
Ity dia fomba ivelaran'ny fomba fijery mialoha. Satana dia mitaona ny vahoaka ankehitriny ary manenjika ny Eglizy. Fa ny vaovao tsara dia hoe ho resy ireo mpanenjika ny fiangonana, hajanona ny fitaoman'i satana, hatsangana ireo olo-masina ary hiara-manjaka amin'i Kristy mandritra ny arivo taona. avy eo
Navoaka vetivety i Satana ary avy eo natsipy tao anaty dobo mirehitra. Dia hisy fitsanganana amin'ny maty tsy kristiana.
Toa izany no fomba fijerin'ny ankamaroan'ny fiangonana voalohany, indrindra fa any Asia Minor. Raha ny toeran'ny Bokin'ny Apokalipsy no manondro hevitra hafa dia tsy nahomby ny nahatonga ireo mpamaky voalohany. Toa nino izy ireo fa hanapaka ny arivo taona i Kristy amin'ny fiverenany.
Hevitra ho an'ny fiandoham-pirenena
Raha tena miharihary tokoa ny premillennialism, nahoana ny Kristianina mino ny Baiboly maro no mino an’izany? Tsy hiatrika fanenjehana na fanesoana momba ity olana ity ianao. Tsy manana fanerena miharihary avy any ivelany izy ireo mba hino zavatra hafa, fa ataony ihany izany. Milaza ho mino ny Baiboly izy ireo, nefa milaza fa hifarana ny arivo taona ao amin’ny Baiboly fa tsy hanomboka amin’ny fiverenan’i Kristy. Izay miteny voalohany dia miseho ho marina raha tsy miteny ny faharoa8,17). Tsy afaka mamaly ny fanontaniana izahay raha tsy efa naheno ny andaniny sy ny ankilany.
Ny fotoana Apokalypsy 20
Raha ny momba ny fomba fiandohan'ny vanim-potoana, dia te hanomboka amin'ity fanontaniana ity isika: Ahoana raha tsy tanteraka ny tantaran'ny Apokalypsy 20 araka ny andininy faha-19? Jaona dia nahita ny fahitana ny toko faha-20 taorian'ny fahitana ny fahitana ao amin'ny toko faha-19, fa ahoana kosa raha tsy tonga ny fahitana amin'ny fandaharana izay tena tanteraka? Ahoana raha ny Apokalypsy 20 no mitondra antsika amin'ny fotoana hafa ankoatra ny faran'ny Toko 19?
Ity misy ohatra iray momba izany fahalalahana mandroso na miverina mandritry ny fotoana: Ny Toko 11 dia mifarana amin'ny trompetra fahafito. Ny toko faha-12 avy eo dia entinay miverina amin'ny vehivavy miteraka zazalahy ary eo am-piarovana 1260 andro ilay vehivavy. Izany dia matetika takatra hanondroana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy sy ny fanenjehana ny Fiangonana. Fa manaraka izany eo amin'ny fizotran'ny literatiora taorian'ny trompetra fahafito. Ny fahitan'i Jaona dia nampiverina azy ara-potoana mba hamelabelarana lafiny hafa amin'ny tantara.
Ka ny fanontaniana dia hoe: mitranga ve ny Apokalypsy 20? Mampiverina antsika ara-potoana ve izany? Ary bebe kokoa kokoa, misy ve ny porofo ao amin'ny Baiboly fa izany no fandikana tsara kokoa izay nambaran'Andriamanitra?
Eny, hoy ny fahitana Amillennial. Misy porofo ao amin'ny Soratra Masina fa efa nanomboka ny fanjakan'Andriamanitra, dia nofatoran'i satana, fa hisy ny fitsanganan'ny maty iray ihany, dia ny lanitra sy tany vaovao ny fiverenan'i Kristy. Fahadisoana tsotra izao ny mampitaha ny Bokin'ny Apokalipsy, miaraka amin'ireo marika rehetra sy ny fahasarotana misy azy amin'ny fandikana, miaraka amin'ny sisa amin'ny Soratra Masina. Mila mampiasa andinin-teny mazava tsara izahay handikana ny tsy mazava fa tsy amin'ny lafiny iray hafa. Amin'ity tranga ity, ny Bokin'ny Apokalipsy dia fitaovana tsy mazava sy mampiadihevitra, ary ireo andininy ao amin'ny Testamenta Vaovao dia mazava momba an'io raharaha io.
Ny faminaniana dia ara-panoharana
luks 3,3Ohatra, ny -6 dia mampiseho amintsika ny fomba fahatakarana ny faminaniana ao amin’ny Testamenta Taloha: «Ary Jaona Mpanao-batisa nandeha nanodidina an’i Jordana ka nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin’ny Bokin’ny tenin’i Isaia mpaminany hoe: Feon'ny mpitory teny tany an'efitra izany hoe: Amboary ny lalan'i Jehovah, ary ahitsio ny lalany! Hampitomboina ny lohasaha rehetra, ary haetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra; ary izay miolakolaka ho tonga mahitsy, ary izay miolakolaka ho tonga ara-dalana. Ary ny olona rehetra hahita ny Mpamonjy an’Andriamanitra.
Raha atao amin'ny teny hafa, rehefa niresaka momba ny tendrombohitra sy ny lalana ary ny efitra i Isaia dia niteny tamin'ny fomba mazava kokoa izy. Ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha dia nomena tamin'ny fiteny an'ohatra mba hisolo tena ny zava-mitranga famonjena amin'ny alalan'i Kristy.
Araka ny nolazain'i Jesosy teny an-dalana ho any Emaosy, ireo mpaminany ao amin'ny Testamenta Taloha dia niresaka azy. Raha hitantsika ny fanantitranteran-kevitr'izy ireo lehibe amin'ny vanim-potoana ho avy, tsy ho hitantsika ao amin'ny fahazavan'i Jesoa Kristy ireo faminaniana ireo. Manova ny fomba famakiantsika ny faminaniana rehetra izany. Io no fifantohana. Izy no tena tempoly, izy no David tena, izy no tena Isiraely, ny fanjakany dia ny fanjakany.
Toy izany koa no hitantsika amin’i Petera. Nilaza i Petera fa tanteraka tamin’ny androny ny faminaniana iray momba an’i Joela. Andeha hojerentsika ny Asan’ny Apostoly 2,1621: “Fa izao no nolazain’i Joela mpaminany: Ary izao no ho tonga any am-parany, hoy Andriamanitra, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho; ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ary ny zatovonareo hahita fahitana, ary ny loholonareo hanonofy; ary amin’izany andro izany dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny mpanompoko sy ny ankizivaviko Aho, ka haminany izy. Ary Izaho hanao fahagagana eny amin'ny lanitra ambony sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo ary setroka; ny masoandro hampodina ho aizina ary ny volana ho ra, alohan'ny hahatongavan'ny andro lehibe hisehoan'ny Tompo. Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena”.
Ka maro amin'ireo faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha dia momba ny vanim-potoan'ny Fiangonana, ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Raha misy millennium izay mbola ho avy, dia tsy ao anatin'ny andro vitsivitsy isika izao. Tsy misy fehezanteny roa tao anatin'ny andro vitsivitsy. Rehefa niresaka fahagagana tany an-danitra ireo mpaminany sy famantarana hafahafa teo amin'ny masoandro sy ny volana, ny faminaniana toy izany dia azo tanterahina amin'ny fomba tsy ampoizina - tahaka ny tsy nampoizina ny fandatsahana ny Fanahy Masina amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra.
Tsy tokony holavintsika an-tsakany sy an-davany ny fandikana ara-panoharana amin'ireo faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha satria nasehon'ny Testamenta Vaovao fa afaka mahatakatra ara-bakiteny ireo faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha dia azo tanterahina amin'ny alalan'ny fanatanterahana ara-panoharana amin'ny vanim-potoan'ny fiangonana, na amin'ny fomba tsara kokoa amin'ny lanitra vaovao sy tany taorian'ny niverenan'i Kristy. Ny zavatra rehetra ampanantenain'ny mpaminany fa azontsika tsara kokoa ao amin'i Jesosy Kristy, na ankehitriny na amin'ny lanitra sy tany vaovao. Ireo mpaminany ao amin'ny Testamenta Taloha dia nitantara fanjakana izay tsy ho tapitra, fanjakana mandrakizay, vanimpotoana mandrakizay. Tsy niresaka momba ny "vanim-potoana volamena" voafetra izy ireo aorian'izay fa rava ny tany ary haorina indray.
Ny Testamenta Vaovao dia tsy manazava ny faminaniana rehetra ao amin'ny Testamenta Taloha. Misy ohatra iray fahatanterahany fotsiny izay mampiseho fa ireo soratra tany am-boalohany dia nanoratra tamin'ny fiteny an'ohatra. Tsy manaporofo ny fahitan'i Amillennial izany, fa manafoana ny vato misakana. Nahita porofo misimisy kokoa ao amin'ny Testamenta Vaovao isika izay mahatonga ny Kristiana maro hino amin'ny fomba fijery Amillennial.
Voalohany, andeha hojerentsika haingana ny Daniela 2. Tsy manohana ny premillenialisme izy io, na dia eo aza ny fiheverana sasany mamaky azy io. «Fa amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay; ary ny fanjakany tsy ho tonga amin’ny olon-kafa. Hotorotoroiny sy horavany ireo fanjakana rehetra ireo; fa izy kosa hitoetra mandrakizay » (Daniela 2,44).
Nilaza i Daniel fa hanala ny fanjakan'olombelona rehetra ny Fanjakan'Andriamanitra ary hitoetra mandrakizay. Tsy misy fambara amin'ity andininy ity fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fiangonana izay saika horavan'ny fahoriana lehibe, ary avy eo dia vanim-potoana arivo taona izay saika ravan'ny famotsoran'i Satana ary avy eo dia arahin'i Jerosalema vaovao. izany. Tsia, io andininy io dia milaza tsotra fotsiny fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia handresy ny fahavalo rehetra ary hitoetra mandrakizay. Tsy tokony handresy ny fahavalo rehetra indroa na hanangana ny fanjakana intelo.
Ny faminaniana Tendrombohitra Oliva no faminaniana feno tsipiriany nomen'i Jesosy. Raha manan-danja ho azy ny millenium, dia tokony hahita famantarana isika ao. Saingy tsy izany no zava-misy. Fa kosa ahitantsika ny fomba namaritan'i Jesosy ny fiverenany, narahin'ny fitsipaham-pitondrantena sy avy hatrany ny valiny. Ny Matio 25 dia tsy mamaritra ny olo-marina hitsangana amin'ny fitsarana ihany - mampiseho koa ny fomba niatrehan'ny ratsy fanahy ny mpitsara azy ary resin'ny alahelo sy ny haizina tafahoatra. Tsy misy porofo eto momba ny elanelana arivo taona eo anelanelan'ny ondry sy osy.
Nanome fanazavana hafa momba ny fahatakarany ny faminaniana ao amin’ny Matio 1 i Jesosy9,28« Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Hianareo izay nanaraka Ahy dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny, raha vao teraka ny Zanak’olona, ​​ka hipetraka amin’ny seza fiandrianana roa ambin’ny folo ka hitsara ny foko roa ambin’ny folo. ny Isiraely.»
Tsy miresaka momba izany mandritra ny arivo taona i Jesosy izay mbola misy ny ota ary i Satana no voafatotra vetivety. Rehefa miresaka momba ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra izy, dia midika izany fa fanavaozana ny zava-drehetra - lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy nilaza na inona na inona izy
mandritra ny arivo taona eo anelanelan'ny. Io foto-kevitra io dia tsy hoe Jesosy no nilaza kely indrindra
zava-dehibe satria tsy nilaza na inona na inona momba izany.
Toy izany koa no nitranga tao amin’ny fiangonana voalohany. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 3,21 Nilaza i Petera fa “Kristy tsy maintsy mitoetra any an-danitra mandra-pahatongan’ny fotoana hamerenana izay rehetra nolazain’Andriamanitra tamin’ny vavan’ny mpaminaniny masina”. Haverin’i Kristy amin’ny laoniny ny zava-drehetra rehefa miverina izy, ary nilaza i Petera fa izany no fandikana marina ny faminaniana ao amin’ny Testamenta Taloha. Tsy mandao ny ota i Kristy mba hamorona krizy goavana arivo taona aty aoriana. Amboary ny zava-drehetra indray mandeha - lanitra nohavaozina sy tany nohavaozina, miaraka amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fiverenan'i Kristy.
Mariho izay nolazain’i Petera ao 2. Petrus 3,10 dia nanoratra hoe: “Fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron’i Jehovah; dia hiempo amin'ny firohondrohona mafy ny lanitra; fa ho levon’ny hafanana ny tenan’ny zavatra rehetra, ary ny tany sy ny asa eo amboniny dia hotsaraina”. Manadio ny tany manontolo ny farihy afo amin’ny fiverenan’i Kristy. Tsy milaza ny vanim-potoana arivo taona izy io. Ao amin’ny andininy faha-12-14 dia milaza hoe: «... izay hiempoan’ny lanitra amin’ny afo sy hiempoan’ny zavatra rehetra amin’ny hafanana. Fa isika kosa miandry lanitra vaovao sy tany vaovao, araka ny teny fikasany, izay itoeran’ny fahamarinana. Koa amin’izany, ry malala, raha mbola miandry ianareo, dia miezaha mba ho hita tsy misy tsiny sy tsy manan-tsiny ao amin’ny fiadanana eo anatrehany.”
Tsy andrintsika taona arivo taona akory izany, fa ho lanitra vaovao sy tany vaovao. Rehefa miresaka ny vaovao tsaran'ny tontolo mahafinaritra isika rahampitso, izay tokony hifantohantsika dia tsy vanim-potoana fotoana izay misy ny ota sy ny fahafatesana. Misy vaovao tsara kokoa tokony hifantohana: tokony andrasantsika ny hamerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra any an-danitra sy tany vaovao. Izany rehetra izany dia hitranga amin'ny andron'ny Tompo rehefa hiverina i Kristy.
Mitovy hevitra amin’izany koa no asehon’i Paoly ao amin’ny 2. Thessalonians 1,6-7: “Fa marina amin’Andriamanitra ny hamaly izay mampahory anareo, fa ianareo kosa, izay mijaly, mba hiara-mitsahatra aminay, amin’ny hisehoan’i Jesosy Tompo avy any an-danitra mbamin’ny anjelin’ny heriny.” Hosazin’Andriamanitra ireo mpanenjika tamin’ny taonjato voalohany rehefa hiverina izy. Midika izany fa fitsanganan’ny tsy mpino amin’ny maty, fa tsy ny mpino ihany, amin’ny fiverenan’i Kristy. Midika izany fa fitsanganana amin’ny maty tsy misy fotoana eo anelanelany. Hoy indray izy ao amin’ny andininy faha-8-10: “… amin’ny lelafo mba hamaliana izay tsy mahalala an’Andriamanitra sy tsy mankatò ny filazantsaran’i Jesosy Tompontsika. Hizaka famaizana, fahaverezana mandrakizay, avy amin’ny tavan’ny Tompo sy amin’ny herin’ny voninahiny izy ireo, rehefa tonga Izy, mba hankalazan’ny olony masina Azy sy hisehoana ho mahagaga amin’ny mino rehetra amin’izany andro izany; satria nino izay nambaranay taminareo ianareo.
Izy io dia mamaritra ny fitsanganana amin'ny maty, amin'ny fotoana iray, amin'ny andro hiverenan'i Kristy. Raha miresaka ny fitsanganan'ny maty roa ny bokin'ny Apokalipsy dia mifanohitra amin'ny nosoratan'i Paoly. Nilaza i Paoly fa atsangana amin'ny andro iray ny tsara sy ny ratsy.
Naverin’i Paoly fotsiny izay nolazain’i Jesosy ao amin’ny Jaona 5,28-29 hoy izy: “Aza gaga amin’izany. Fa ho avy ny andro izay handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy, dia izay nanao tsara ho amin’ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin’ny fitsanganana ho amin’ny fitsarana. Jesosy dia miresaka momba ny fitsanganan'ny tsara sy ny ratsy miaraka amin'ny fotoana iray - ary raha misy afaka mamaritra tsara ny ho avy, dia i Jesosy. Raha mamaky ny bokin’ny Apokalypsy isika izay mifanohitra amin’izay nolazain’i Jesosy dia diso ny fandikana azy io.
Andeha hojerentsika ny Romana, ilay drafitra lava indrindra nosoratan’i Paoly momba ny foto-pampianarana. Nolazainy tao amin’ny Romana ny voninahitry ny hoavy 8,18-23: “Fa matoky aho fa ny fahoriana ankehitriny dia tsy mampandanja ny voninahitra izay haseho amintsika. Fa ny fiandrasana ny zavaboary dia miandry ny hisehoan'ny zanak'Andriamanitra. Ny zavaboary dia iharan'ny tsy fahatanterahana - tsy amin'ny sitrapony, fa amin'ny alalan'izay nampanaiky azy - fa amin'ny fanantenana; fa ny zavaboary koa dia ho afaka amin’ny fanandevozan’ny tsi-fahatanterahana ho amin’ny fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra” (and. 18-21).
Nahoana ny zavaboary no miandry ny zanak'Andriamanitra rehefa mahazo ny voninahiny? Satria hafahana avy amin'ny fanandevozana azy ihany koa ny fahariana - angamba amin'ny fotoana iray koa. Rehefa aseho amin'ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra dia tsy hiandry intsony ny fahariana. Havaoina ny famoronana - hisy lanitra sy tany vaovao rehefa hiverina i Kristy.
Mitovy hevitra amintsika koa i Paoly ao 1. Korintiana 15. Milaza izy eo amin’ny andininy faha-23 fa izay an’i Kristy dia hatsangana amin’ny fiverenan’i Kristy. Milaza amintsika avy eo ny andininy faha-24 hoe: “Ary rehefa afaka izany, dia ny farany ...” izany hoe rehefa tonga ny farany. Rehefa tonga Kristy hanangana ny olony, dia handringana ny fahavalony rehetra Izy, hamerina ny zavatra rehetra, ary hanolotra ny fanjakana amin’ny Ray.
Tsy ilaina ny mitaky vanim-potoana arivo taona eo anelanelan'ny andininy 23 sy andininy faha-24. Farafaharatsiny afaka milaza fa raha misy fotoana voafetra, dia tsy dia manan-danja ho an'i Paul izany. Eny tokoa, toa tsy hanohitra izay nosoratany any an-kafa ny fotoam-potoana toy izany ary hanohitra izay nolazain'i Jesosy mihitsy.
Ny Romana 11 dia tsy milaza ny momba ny fanjakana aorian'ny niverenan'i Kristy. Ny zavatra lazainy dia mety hifanaraka amin'ny fe-potoana toa izany, fa tsy misy zavatra ao amin'ny Romana 11 mihitsy izay afaka manosika antsika haka sary an-tsaina ny fe-potoana toy izany.
Ankehitriny isika dia tsy maintsy mijery ny fahitana hafahafa sy ara-panoharana nataon'i John izay niteraka resa-be iray manontolo. Miaraka amin'ireo biby hafahafa sy ireo tandindona any an-danitra indraindray, ve i Jaona dia nanambara zavatra tsy nambaran'ireo apôstôly hafa, sa nasehony tamin'ny endrika hafa samy hafa ny fomba faminaniana hafa?
Andeha isika hanomboka amin'ny Apokalypsy 20,1. Nisy iraka [anjely] avy any an-danitra hamatotra an’i Satana. Mety hieritreritra ny olona iray nahafantatra ny fampianaran’i Kristy hoe: efa nitranga izany. Ao amin’ny Matio 12, Jesosy dia voampanga ho nandroaka fanahy ratsy tamin’ny alalan’ny andrianany. Jesosy namaly hoe:
"Fa raha ny Fanahin'Andriamanitra no amoahako ny fanahy ratsy, dia efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra" (and. 28). Mino isika fa Jesosy dia namoaka ny demonia tamin'ny Fanahin'Andriamanitra; dia mino koa isika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa tonga amin'izao fiainana izao.
Dia hoy indray i Jesosy nanampy ny andininy 29: «Sa ahoana no hidiran'ny olona miditra ao an-tranon'ny matanjaka iray ary handroba ny fananan'ny ankohonany raha tsy izy no tsy namatotra an'io lehilahy matanjaka io? Amin'izay ihany izy vao afaka mandroba ny tranony. » Afaka nandidy ireo demonia manodidina i Jesosy satria efa niditra sy namatotra ny tontolon'i Satana izy. Mitovy ny teny amin'ny Apokalypsy 20. Resy i Satana ary voafatotra. Ity misy porofo bebe kokoa momba izany:
Ao amin’ny Jaona 12,31 Hoy i Jesosy: “Ankehitriny dia hihatra amin’izao tontolo izao ny fitsarana; ankehitriny ny andrianan’izao tontolo izao dia horoahina”. Noroahina i Satana nandritra ny fanompoan’i Jesosy.
Kolosiana 2,15 dia milaza amintsika fa efa nesorin’i Jesosy ny herin’ny fahavalony ary “nandresy azy tamin’ny hazo fijaliana”.
Hebreo 2,14-15 dia milaza amintsika fa Jesosy dia nandrava ny devoly [nalaina fahefana] tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana - izany dia teny mahery. "Satria nofo aman-drà ny zaza, dia nandray izany koa Izy, mba hanalany fahefana amin'izay manana fahefana amin'ny fahafatesana, dia ny devoly, amin'ny fahafatesany."
In 1. Johannes 3,8 Izao no voalaza ao: “Ny Zanak’Andriamanitra niseho handrava ny asan’ny devoly”.
Tahaka ilay andalan-tsoratra farany ao amin'ny Jodasy 6: "Na ny anjely aza, izay tsy nitana ny toerana misy azy any an-danitra fa nandao ny fonenany, dia nitazona ny fitsarana andro lehibe amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina."
Efa voafatotra Satana. Ny heriny dia efa voaferana. Ka raha ny Apokalypsy 20 milaza fa nahitan'i Jaona nifatotra i Satana, dia afaka hanatsoaka hevitra isika fa fahitana hatramin'ny lasa izany, zavatra efa lasa teo. Tato izahay hahatsapa ampahany amin'ny sary izay tsy naseho fahitana hafa anay. Hitantsika fa na eo aza ny fitaomam-panahiny, i Satana dia efa resy fahavalony. Tsy azony atao intsony ny mitazona ny olona ho voataona sedra tanteraka. Ny bodofotsy dia nesorina ary ny olona avy amin'ny firenena rehetra dia efa nahare ny filazantsara ary nanatona an'i Kristy.
Avy eo dia tarihina ao ambadiky ny sehatra isika hahita fa ireo maritiora dia efa miaraka amin'i Kristy. Na dia notapahin-doha na novonoina ho faty aza izy ireo dia tonga velona ary niara-nipetraka tamin’i Kristy. Efa any an-danitra izy ireo izao, hoy ny fijerin'ny vanim-potoana, ary io no fitsanganana voalohany izay nahatrarany indray mandeha. Ny fitsanganana faharoa dia hatsangana amin'ny vatana; ny voalohany dia tsotra izao fa rehefa mandeha miaina miaraka amin'i Kristy isika. Izay rehetra mandray anjara amin'ity fitsanganana ity dia voatahy sy masina.
Ny fahafatesana voalohany dia hafa noho ny faharoa. Noho izany, tsy marina raha hihevitra fa ny fitsanganana voalohany dia ho toy ny faharoa. Samy hafa izy ireo. Tahaka ny maty maty indroa ny fahavalon'Andriamanitra, dia hiaina indroa koa ireo navotana. Amin'ity fahitana ity, ireo maritiora dia efa miaraka amin'i Kristy, miara-manjaka aminy, ary maharitra ela izany, ao amin'ny andian-teny "arivo taona".
Rehefa tapitra io fotoana ela io dia hafahana i Satana, dia hisy fahoriana lehibe, ary i Satana sy ny heriny ho resy mandrakizay. Hisy ny fitsarana, dobo mirehitra, ary avy eo ny lanitra sy tany vaovao.
Misy hevitra mahaliana iray hita ao amin’ny soratra grika tany am-boalohany ao amin’ny andininy faha-8: Mamory ny olona i Satana, tsy ho amin’ny ady ihany, fa ho amin’ny ady — ao amin’ny Apokalypsy 1.6,14 sy 19,19. Ireo andininy telo ireo dia mamaritra ny ady lehibe iray izay mifarana amin'ny fiverenan'i Kristy.
Raha tsy nanana afa-tsy ny Bokin'ny Apokalipsy isika, dia mety hanaiky ny fomba fijery ara-bakiteny - i Satana dia nofatorana arivo taona, fa misy ny fitsanganana amin'ny maty iray, fa misy dingana telo farafahakeliny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy farafahakeliny roa fara fahakeliny. misy fehezan-teny mihoatra ny iray amin'ny "andro farany".
Saingy tsy ny anjarantsika fotsiny ny bokin'ny Apokalipsy. Manana andinin-teny maro hafa isika
izay mampianatra mazava ny fitsanganana amin'ny maty ary mampianatra fa ho avy ny farany rehefa miverina i Jesosy. Noho izany, raha mahita zavatra ao amin'ity boky apokaliptika ity izay toa mifanohitra amin'ny sisa amin'ny Testamenta Vaovao isika, dia tsy mila manaiky ilay hafahafa satria io no farany [Bokin'ny Baiboly]. Fa kosa mijery ny teny manodidina azy ao anaty boky fahitana sy tandindona isika ary afaka mahita ny fomba azo adika amin'ny fomba tsy mifanohitra amin'ny sisa amin'ny Baiboly ny tandindona.
Tsy azontsika atao ny mametraka rafitra teolojika be pitsiny amin'ilay boky tsy dia mazava loatra ao amin'ny Baiboly. Hanampy olana izany ary hampiala ny saintsika amin'ny tena toetran'ny Testamenta Vaovao. Ny hafatra ara-Baiboly dia tsy mifantoka amin'ny fanjakana vonjimaika aorian'ny fiverenan'i Kristy. Izy io dia mifantoka amin'izay nataon'i Kristy tamin'ny fotoana voalohany, ny zavatra ataony ao am-piangonana amin'izao fotoana izao, ary amin'ny maha faratampony lehibe ny fifaranan'ny zava-drehetra any amin'ny mandrakizay taorian'ny niverenany.
Valiny momba ny Amillennialism
Ny fomba fijery Amillennial dia tsy misy ny fanohanan'ny Baiboly. Tsy azo averina fotsiny izany raha tsy mianatra. Ireto misy boky vitsivitsy izay afaka manampy anao hianatra momba ny Arivotaona.
Ny dikan'ny Arivotaona: Fomba efatra, namboarin'i Robert Clouse, InterVarsity, 1977.
Fanambarana: Fomba efatra: Fanehoan-kevitra kabary
Parallel Commentary], nataon'i Steve Gregg, Nelson Publisher, 1997.
Ilay Maze Arivo Taona: Mamily Safidy evanjelika
Sort Pilihan], nataon'i Stanley Grenz, InterVarsity, 1992.
Hevitra telo momba ny Arivotaona sy any Ankoatr'i, avy amin'i Darrell Bock, Zondervan, 1999.
Nanoratra boky momba ny milleniuma sy toko tsara momba azy io i Millard Erickson. Manome topimaso amin'ny safidy izy alohan'ny hanapahana ny iray.
Ireo boky rehetra ireo dia manandrana mamoaka ireo tanjaka sy ny fahalemen'ireo foto-kevitra rehetra momba ny taonarivo. Ao amin'ny sasany, ny mpanoratra dia mitsikera ny fomba fijerin'ny tsirairay. Ireo boky rehetra ireo dia mampiseho fa be pitsiny ny fanontaniana ary ny fandalinana ireo andininy voafaritra dia azo atao antsipiriany. Izany no iray amin'ireo antony hitohizan'ny adihevitra.
Ny valintenin'ny praiminisista
Inona no mety ho fihetsik'ireo mpanohana ny praiministie amin'ny fomba fiandohan'ny vanim-potoana? Ny valiny dia mety ahitana ireto teboka efatra manaraka ireto:
Ny Bokin'ny Apokalipsy dia ampahany amin'ny Baiboly ary tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny fampianarany fotsiny satria sarotra ny manazava na satria literatiora apokaliptika izany. Tokony hanaiky izany ho ny Soratra Masina isika, na dia manova ny fomba fijerintsika andalana hafa aza izany. Tokony havelantsika manambara zava-baovao izany fa tsy ny famerenam-baovao fotsiny. Tsy afaka mieritreritra mialoha isika fa tsy hanambara na inona na inona vaovao na hafa.
Ny fanambarana fanampiny dia tsy fifanoherana amin'ny fanambarana teo aloha. Marina fa i Jesosy dia niresaka ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, saingy tsy misy ny mifanipaka raha mahita fa afaka manangana eo alohan'ny olon-drehetra izy. Noho izany dia efa manana fitsanganana amin'ny maty roa isika nefa tsy manohitra an'i Kristy, ary tsy fifanolorana ny fiheverana fa ny iray fitsanganana amin'ny maty dia mizara roa na roa. Ny dikan'izany dia ny hoe atsangana indray mandeha ny olona tsirairay.
Ny resaka dingana fanampiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Niandry ny Mesia izay hampiditra avy hatrany ny vanim-potoana volamena ny Jiosy, saingy tsy nanao izany izy. Nisy fahasamihafana lehibe teo amin’ny fahatanterahan’ireo faminaniana. Hazavain’ny fanambarana taty aoriana izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampidirana ireo vanim-potoana tsy mbola nambara teo aloha dia tsy fifanoherana - fa fanazavana. Ny fahatanterahany dia azo atao ary efa nitranga tamin'ny dingana misy banga tsy fantatra. 1. Ny Korintiana 15 dia mampiseho ireo dingana ireo, ary toy izany koa ny bokin’ny Apokalypsy amin’ny heviny voajanahary indrindra. Tsy maintsy mamela ny mety hisian'ny zavatra hivoatra isika aorian'ny fiverenan'i Kristy.
Ny fijery vanim-potoana dia toa tsy mifantoka tsara amin'ny fitenin'ny Apokalypsy 20,1: 3. Tsy fehezin'i satana ihany koa, voafatotra sy fehezina koa izy. Ny sary dia iray izay tsy misy fitaomana azy intsony, na dia ampahany ihany aza. Marina mihitsy ny nilazan'i Jesosy fa namatotra an'i satana sy marina ny nandreseny an'i satana teo amin'ny hazo fijaliana. Saingy tsy mbola tonga tanteraka ny fandresen'i Jesosy Kristy an'i Satana. Mbola mazoto i Satana, nefa mbola mandrisika olona maro be izy. Ireo mpamaky tany am-boalohany izay nenjehin'ny fanjakan'ny biby dia tsy noheveriny ho voafatotra sahady i Satana fa tsy afaka nitaona azy intsony izy. Ireo mpamaky dia nahafantatra tsara fa ny ankabeazan'ny Fanjakana Romanina dia masiaka.
Raha fintinina dia afaka mamaly ny mpanaraka ny fomba fijery Amillenne: Eny, afaka mamela Andriamanitra hanambara zavatra vaovao isika, saingy tsy afaka ny hihevitra isika hatramin'ny voalohany fa ny zavatra tsy mahazatra rehetra ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy dia zavatra vaovao avokoa. Fa kosa, mety ho hevitra tranainy amin'ny akanjo vaovao. Ny hevitra hoe ny fitsanganana amin'ny maty dia mety ho tafasaraka amin'ny elanelana dia tsy midika akory izany. Ary ny hevitray momba ny tsapan'ireo mpamaky tany am-boalohany momba an'i Satana dia ny fandikana ny momba ny
Ny fanehoana an'ohatra apokalipika dia midika fifehezana. Afaka manao fahatsapana momba ny lohahevitra isika
amin'ny boky voasoratra amin'ny fiteny ara-panoharana, aza manamboatra paikady feno.
Ankehitriny, inona no tokony holazaina rehefa avy nahita ireo fomba roa nifanena taova momba ny Arivotaona? Azontsika atao ny milaza fa "ny lovantsofina kristiana sasany dia mandika ny fitenenan-taona ho 1000 taona izay nialoha na aorian'ny fiverenan'i Kristy, ny sasany kosa mino fa ny porofon'ny Soratra Masina dia mampiseho fandikana ara-panoharana: fe-potoana tsy voafetra izay mifanaraka amin'ny fotoana tsy voafetra. Manomboka ary mifarana ny fitsanganan'i Kristy amin'ny fiverenany. »
Ny Millenium dia tsy foto-kevitra mamaritra ny tena kristiana marina ary tsia. Tsy te hampisaraka ny kristiana miorina amin'ny safidiny ny fomba handikana izany lohahevitra izany. Fantatsika fa ny kristiana tso-po mitovy finoana, mitovy finoana ary mitovy finoana dia afaka tonga amin'ny fehin-kevitra samihafa momba an'io fampianarana io.
Ny mpikambana sasany ao amin'ny fiangonantsika dia mizara ny vanim-potoana mialoha, ny sasany amin'ny vanim-potoanan'ny taona, na ny fomba fijery hafa. Nefa maro ny zavatra azontsika ekena:
Mino isika rehetra fa manana ny hery rehetra Andriamanitra ary hanatanteraka ny faminaniany rehetra.
Mino isika fa nitondra antsika tany amin'ny fanjakany i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao.
Mino isika fa nanome fiainana i Kristy, fa hiaraka aminy isika rehefa maty ary hitsangana amin'ny maty.
Ekenay fa Jesosy nandresy ny devoly, saingy mbola manana fitaomana eo amin'ity tontolo ity i Satana.
Ekenay fa hatsahatra tanteraka ny fitarihan'i Satana amin'ny hoavy.
Mino izahay fa hitsangana daholo ny tsirairay ary hotsarain Andriamanitra mpamindra fo.
Mino izahay fa hiverina i Kristy ary handresy ny fahavalo rehetra ary hitarika antsika ho any mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra.
Mino lanitra vaovao sy tany vaovao itoeran'ny fahamarinana isika ary haharitra mandrakizay ity tontolo mahafinaritra ity rahampitso.
Mino izahay fa ny mandrakizay dia ho tsara kokoa noho ny arisenta taona.
Betsaka ny azontsika atao rehefa mifaninana; tsy mila misaraka miorina amin'ny tsy fijerena samy hafa momba ny fandaharana izay hataon'Andriamanitra ny sitrapony.
Ny fandaharan-javatra taloha tato ho ato dia tsy ampahany amin'ny iraky ny Fiangonana hitory. Ny filazantsara dia momba ny fomba hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy ny vanim-potoana misy raha mitranga ny zava-drehetra. Jesosy dia tsy nanantitrantitra ny fahandroana; ary tsy nanantitrantitra fanjakana iray izy fa haharitra mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ireo toko 260 ao amin'ny Testamenta Vaovao, iray ihany no momba ny Arivotaona.
Tsy ataontsika lohahevitra ny finoana ny fandikana ny Apokalypsy 20. Manana zavatra manan-danja kokoa tokony hotorintsika isika, ary manana zavatra tsara kokoa horesahina. Izahay dia mitory fa amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy dia tsy afaka miaina afa-tsy amin'ity vanim-potoana ity, tsy mandritra ny 1000 taona fotsiny, fa mandrakizay amin'ny fifaliana, fiadanana ary fanambinana izay tsy mitsahatra.
Fomba voalanjalanja ho an'ny millennium
Saika ny kristiana rehetra no manaiky fa hiverina i Kristy ary hisy ny fitsarana.
Na inona na inona hataon'i Kristy aorian'ny fiverenany, tsy misy olona mino izay ho diso fanantenana.
Ny vanimpotoana mandrakizay dia be voninahitra kokoa noho ny arivosiona. Amin'ny tsara indrindra, ny Millennium no tsara indrindra faharoa.
Ny filaharana araka ny fotoana voafetra dia tsy ampahany manan-danja amin'ny filazantsara. Ny filazantsara dia momba ny fomba hidirany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy ny antsipirihany momba ny fizotrany sy ny lafiny ara-potoana sasany.
Koa satria tsy manasongadina ny toetra na ny fotoan'ny taonarivo ny Testamenta Vaovao, dia manatsoaka hevitra isika fa tsy bara ivon-toerana ao amin'ny andraikitra nomen'ny Fiangonana.
Voavonjy ny olona raha tsy misy ny fahatokisan-tena sasany momba ny Fanjakana Arivo. izany
Tsy ivon-toerana ny filazantsara. Mety manana hevitra samy hafa ny mpikambana.
Na inona na inona fomba fijerin'ny mpikambana iray dia tokony hanaiky izy fa ny kristiana hafa dia mino an-kitsimpo fa mampianatra hafa ny Baiboly. Ny mpikambana dia tsy tokony hitsara na haneso izay manana fomba fijery hafa.
Ny mpikambana dia afaka manabe ny tenany momba ny finoana hafa amin'ny famakiana ny iray na maromaro amin'ireo boky etsy ambony.